सन्देशमुलक फिल्म “प्याडम्यान “ – Ranga Darpan
सन्देशमुलक फिल्म “प्याडम्यान “
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Feb 11, 2018
रंग दर्पण २८ माघ = बलिउडका ‘खिलाडी ब्वाई’ अक्षय कुमार वास्तवमै खेलाडी निस्किए । चाहे एक्सनमा होस् वा रोमान्समा या त कमेडीमा उनी जताततै फिट छन् । पछिल्लो समय उनले ग्रामिण समाजका सानोतिनो विषयलाई तोडिलो ढंगले पेश गरिरहेका छन् ।
सानो बजेट, थोरै पात्र, सामान्य कथामा पनि जोडदार देखिएका छन्, खेलाडी ब्वाई । अघिल्लो पटक उनको फिल्म ‘ट्वाइलेटः एक प्रेम कथा’ले राम्रो व्यापार गर्‍यो । तारिफ पनि उत्तिकै बटुल्यो । अहिले ‘प्याडम्यान’ले उस्तै तहल्का पिटिरहेको छ ।
‘प्याडमेन’ खासमा सेनिटरी नेपकिन अर्थात प्याडको सन्दर्भमा बुनिएको कथा हो । मासिक श्रावको बेला महिलाहरुले प्रयोग गर्ने प्याडको कोणबाट सामाजिक परिस्थिती र व्यवहारलाई उधिनेको छ । तामिलनाडूका एक सामाजिक उद्यमी अरुणाचलम मुरुगनाथमको जीवनमा आधारित रहेको फिल्म भएपनि यसमा एकसरो जीवनगाथा मात्र छैन । फिल्ममा अरुपनि चटनी छन्, जसले जिब्रो रसाइरहन्छ ।
भारत मध्यप्रदेशको एक गाउँ । वेल्डर लक्ष्मीकान्त चौहान -अक्षय कुमार) र गायत्री -राधिका आप्टे) दुबैको बिहे हुन्छ । बिहे पछि गायत्रीको महिनावरी सुरु हुन्छ, त्यहीकारण उनलाई घरबाहिर राखिन्छ ।
लक्ष्मीले थाहा पाउँछ, गायत्रीले महिनावरीमा फोहोर कपडा प्रयोग गरिरहेकी छिन् । महिनावरीमा यस्तै फोहोर र असजिलो बस्तु प्रयोग गर्न वाध्य छन् भन्ने कुरा पनि उनले बुझ्छन् । यही निहुँमा महिलाहरुको योनीमा संक्रमण हुने । रोग लाग्ने । मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
उनी आफ्नो पत्नीलाई त्यस्तो खतराबाट जोगाउन चाहन्छन् । त्यही कारण प्याड खरिद गरेर ल्याउँछन् । तर, प्याडको मूल्य ५५ रुपैयाँ -भारु) पर्छ । यत्तिका महंगो प्याड लगाउन आनाकानी गर्छिन्, गायत्री ।
एकछिन प्रयोग गरेर मिल्काउने प्याड एकातिर महंगो छ, अर्कोतिर शारीरिक संवेदनसिलताको हिसाबले प्रयोग गर्नैपर्ने पनि हुन्छ । यसको मध्यमार्गी विकल्प के हुन सक्छ त ?
आखिरमा लक्ष्मी आफै प्याड बनाउने चक्करमा लाग्छन् । तर, कसैले नगरेको यस्तो काम गर्न हौसिएका लक्ष्मी गाउँलेका अगाडि ‘पागल’ जस्तै देखिन्छन् । गाउँले उनको बिरुद्धमा लाग्छ । घर परिवार पनि । पत्नीले समेत उनको साथ छाड्छन् ।
सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको आँच जोगाउन र पत्नीको स्वास्थ्य-रक्षाका लागि लक्ष्मी प्याड बनाउन कटिबद्ध हुन्छन् । यस क्रममा उनलाई बरी (सोनम कपुर)को साथ मिल्छ । अब लक्ष्मीले प्याड बनाउँछ बनाउँदैन ? उनी आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् ? यसबीचमा उनले के कस्ता उतारचढाव भोग्नुपर्छ ? सबै बेलिबिस्तार लगाउँदै फिल्म टुंगिन्छ ।
फिल्ममा अक्षयकुमार, राधिका आप्टे र सोनम कपुर मूख्य भूमिकामा छन् । उनीहरुबाहेक कुनै पात्रमा फिल्म केन्दि्रत छैन । सर्ट मुभी हुँदै केहि फिल्ममा काम गरिसकेकी राधिका अप्टेले गायत्रीको भूमिकामा आफुलाई अब्बल सावित गरेकी छिन् । मध्यन्तरपछि सोनमको इन्ट्रि हुन्छ । सोनम यसमा थप माझिएर आएकी छिन् । अक्षय कुमार त फिल्मका केन्दि्रय पात्र भइहाले, जसलाई उनले कुनै हिसाबले कमजोर बनाएका छैनन् ।
‘की एन्ड का’, ‘चीनी कम, ‘शमिताभ’, ‘पा’ जस्ता नितान्त भिन्नै ढर्राका फिल्म बनाउने निर्देशक आर बाल्कीको फिल्म हो यो । उनले ‘प्याडम्यान’लाई अघिल्ला फिल्महरु जत्तिकै दमदार बनाएका छन् । निर्देशकिय कोणबाट फिल्म उत्कृष्ट छ । सिनेम्याटोग्राफी दमदार छ । फिल्मको अर्को बलियो पक्ष संवाद हो । अमित त्रिवेदीको संगीतले फिल्ममा चटनीको काम गर्छ । तिख्खर र स्वादिलो ।
मनोरञ्जनसँगै फिल्म सन्देशमुलक छ । यसले प्रेरणादायी कथा बोकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि फिल्म समग्रमा बलियो छैन । केहि कुरामा फिल्म चिप्लिएको छ । प्याडम्यानको कथा केहि तन्किएको र भद्दा जस्तो लाग्न सक्छ ।
रङ्ग दर्पण 10772 posts0comments
सस्तो सुन दिन्छु भनेर २० लाख ठगि ,,
विकल क्रियशन ले चाहना बजारमा ल्याउदै ,,
नेपालगञ्जको आकाशमा बुद्ध एअरको जहाज आधा घण्टा होल्ड हुँदा एक यात्रु बेहोस
काठमाण्डाै - काठमाण्डौबाट नेपालगञ्जका लागी उडेको बुद्ध एअरको जहाज आकाशमा होल्ड हुँदा एक यात्रु बेहोस भएका छन् । मौसम खराब हुँदा…